Iray amin’ny roa amin’ireny olona ireny anefa no tsy mahalala akory fa voan’ny diabeta izy. Amin’ny ankapobeny dia vokatry ny fihinanana zavatra mamy loatra sy be menaka no mahatonga ity aretina iray ity arahin’ny tsy fanaovana fanatanjahantena. Noho izay antony izay indrindra dia hanampy ireo mponina eto an-drenivohitra sy ny manodidina ny Centre médical Marie Stella eny Analamahitsy. Nanatanteraka fitiliana maimaimpoana ny aretina diabeta izy ireo nanomboka omaly alarobia 14 novambra haharitra hatramin’ny faran’ny taona. Tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny andro maneran-tany iadiana amin’ny aretina sady hanentanana ny isam-pianakaviana ihany koa. Izany mantsy no tena olana goavana amin’ny ady hatao amin’ny aretina diabeta eto amintsika, hoy i dokotera Feziny. Manana ny marary ny fianakaviana iray saingy tsy hampiany sy tohanany ilay diabetika mba hahafahany manohitra ilay aretina. Tafiditra ao anatin’izany ny fampirisihina azy ireny hijery hatrany ny tahan’ny siramamy ao anatin’ny vatany izay tokony hatao in-droa isan-kerinandro, ny fanaovana fanatanjahantena, ny fanarahana ireo sakafo efa voatokana omen’ny mpitsabo. Ho an’ireo hita fa tena voan’ny diabeta kosa dia fantatra fa hisy ny fizahana ny fahasalamany amin’ny ankapobeny, arahin’ny torohevitra omen’ny centre.